Hanisa ny fitsidihana misy vokany ve ny teninao? | Martech Zone
Hanisa ny fitsidihana misy vokany ve ny teninao?
Alakamisy, Aogositra 28, 2008 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Omaly, nanoratra ny fomba kajy ny Word Count amin'ny alàlan'ny MySQL amin'ny famoahana bilaogy ao amin'ny WordPress. Te handinika ny lahatsoratro aho raha toa ka nisy fiantraikany tamin'ny bilaogiko ny halavan'ny androko. Ireto ny valiny!
Pejy fitsidihana vs. Word Count
Ny vokany? Miaraka amin'ny enim-bolana amin'ny famoahana isan'andro (indraindray dia maro isan'andro isan'andro) sy ny teny mifandraika isa isaina isan'andro, azoko lazaina tanteraka fa ny isan'ny teny dia tsy nitondra fiovana. Ny nahatonga ny fahasamihafana dia ny kalitaon'ny lahatsoratra fotsiny. Araka ny hitanao, tsy nijaly ny bilaogiko rehefa nanana lahatsoratra fohy aho na rehefa nanana lahatsoratra lava be.
Ny lakilen'ny bilaogy dia ny fanoratana lahatsoratra tsara, tsia manoratra ho an'ny milina fikarohana! Ny hakitroky ny teny lakile dia mety manondro tsara ny pejinao, fa ny backlinks avy amin'ny tranokala hafa dia handrisika ny bilaoginao ho eo an-tampon'ny pejy valiny. Azoko atao ny mivarotra rohy miverina mankamin'ny lahatsoratra mifono teny fanalahidy tonga lafatra isan'andro!
Raha lava volo ny fombanao (toa ahy) dia hisarika mpamaky sasany mankafy ny fahitana ireo hadisoana tsipelina sy fitsipi-pitenenana maro ataoko ianao. 😉 Ny isan'ny fitsidihana ny bilaogiko dia tsy nitsahatra nitombo!
Zava-dehibe ny manamarika fa ny tranokalako dia nihena nilatsaka tamin'ny fivezivezena tamin'ny motera fikarohana (tokony ho 20%) raha izaho navadika ny anarako ary miandry ny fandefasana indray ny Google.
Ny anomaly hatramin'ny farany dia noho ny lazan'ny my Fihenan'ny vidin'ny Starbucks lahatsoratra - iray amin'ireo malaza indrindra amin'ity bilaogy ity… ary koa iray amin'ireo lava indrindra.
Tags: b2c facebookvalin'ny orinasafitarainan'ny mpanjifaCustomer satisfactionfacebook ho an'ny fandraharahanapaikady marketing facebookFAQsmanatsara ny vokatratsy fivadihanaLahatsary Marketingmultidomainmyrepono-dranomasina
WordPress sy MySQL: Inona no isainao amin'ny teninao?
Ny fanantenana andrasana dia mitondra fahafaham-po amin'ny mpanjifa
Aug 28, 2008 amin'ny 4: 04 AM
Andininy lehibe, Manaova fanekena aminao 100%. Mino koa aho fa tontolo kely, tsy misy fotoana ary noho izany dia mazàna aho manoratra lahatsoratra kely kokoa na teboka bala fotsiny.
Aug 29, 2008 amin'ny 7: 30 AM
Mora manoratra lahatsoratra fohy kokoa aho satria matahotra ny havizanan'ny mpamaky. Faly mahita fa tsy tokony ho ny ahiahiko indrindra izany.